Oslo: Xawaaladle Soomaali ah oo ku eedeysan lacag dhaqis: 422 milyan kr !! - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Oslo: Xawaaladle Soomaali ah oo ku eedeysan lacag dhaqis: 422 milyan kr...
Oslo: Xawaaladle Soomaali ah oo ku eedeysan lacag dhaqis: 422 milyan kr !!
Sida uu qoray wargeyska VG ee dalkan Norway, booliska magaalada Oslo ayaa xawaaladle soomaali ah kusoo oogay dacwad-danbiyeed la xiriirto inuu dhaqay ama qaab aan sharci aheyn dalka uga saaray lacag gaareyso 422 milyan kr oo lacagta Norway ah. Ninkan soomaaliga ah ayaa dhankiisa iska fogeeyay danbiyada lagu soo oogay.
48-sano jirkan soomaaliga ah ayay boolisku ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Oslo, isaga oo boorsooyin ku watay lacag cadaan ah oo gaareyso 13,5 milyan kr, kuna sii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ilaalada garoonka ayuu ku wargaliyay inuu wato lacag gaareyso lix(6) milyan oo kr, laakiin markii la furay boorso kale oo uu watay, waxaa laga helay todobo(7) milyan kale oo uusan ilaalada garoonka diyaaradaha ku wargalin. Wuxuuna sidoo kale watay waraaqda cadeynta ee iibsiga saacad nooca qaaliga ah(Rolex) oo qiimaheeda uu gaarayo 2 milyan.
Qabashada ninkan ee xiligaas ayaa aheyd markii labaad ee la qabto isaga oo lacag cadaan ah ka bixinayo Norway, maadaama sanadkii 2018 lagu qabtay isla garoonka diyaaradaha Oslo, isaga oo wato lacag cadaan ah oo gaareyso 110.000 Euro, taas oo boolisku ay markii danbe la wareegeen,
Booliska ayaa sheegay in wixii intaas ka danbeeyay ay il gaar ah ku hayeen xawaadlahan Soomaaliga ah oo boolisku ay sheegeen in mudadii u dhaxeysay 2015 ilaa 2018 uu Norway ka diray lacag gaareyso 617 milyan kr. 422 milyan kr oo lacagtaas kamid ah ayay boolisku sheegeen inay tahay lacag la dhaqay ama sifo aan sharci aheyn dalka looga saaray.
Qareenka booliska ayaa sheegay in laamaha danbi baaristu ay ka shaki qabaan in qeybo badan oo lacagtaas kamid ah ay tahay lacago ay kooxo burcad ah oo ka shaqeeya daroogada ay ka bixiyeen dalka.
Dad aan lacag dirsan, ayaa magacooda lagu diray:
Mid kamid ah waxyaabaha yaabka badan ee ninkan xawaadlaha ah ay boolisku ku eedeynayaan ayaa ah in lacag uu u dirayayay uu ku diray magacyada dad macaamiil ka ah xawaaladiisa oo aan lacagtaas wadanka ka dirsan. Waxeyna sheegeen in boolisku ay heleen magacyo kala duwan oo wax xiriir ah uusan ka dhaxeyn, kuwaas oo hal qof lacago kala duwan ku diray.
Booliska uu helay diiwaanga macaamiisha ninkan xawaaladlaha ah, ayay waxey boolisku sheegeen in hal magac uu numbero kala duwan lacag ku diray, halka dad kala duwan oo lacag loo direyna, ay lacagta ku qaateen isla hal magac.
Ujeedka adeegsiga magacyada dadka aan lacagaha dirsan ee magacooda lacagta lagu diray, ayay boolisku sheegeen inay tuhunsanyihiin in nidaamka xawaaladaha ee sharciga ah la mariyo lacag kooxo burcad ah ay rabaan inay dalka ka saaraan. Arrintaas oo ay boolisku sheegeen inay kasoo horjeedo dhowr sharci oo kuwa lacagaha ah.
Booliska ayaa aaminsan in xawaaladluhu uu kooxo burcad ah ka ganacsato daroogada ah ka gacansiin jiray inay malaayiin dollar oo kasoo xarooto daroogada uu dalka uga saaro, isaga oo marayo nidaamka xawaaladaha.
Qareenka booliska ayaa sheegay in kiiskan uu yahay mid culus oo halis ah oo waqti badan qaadan kara, wuxuuna sheegay in tuhuno badan oo boolisku ay qabaan aysan wali cadaan.
Xigasho/kilde: Oslo-mann siktet for hvitvasking av minst 422 millioner kroner.
Previous articleDumar qaatay talaalka Corona: Naasaha ayaa na weynaaday.
Next articleNin qoys soomaali ah dhibaateeyay oo lagu xukumay xabsi iyo magdhow.